Horudhac: Arsenal vs Crystal Palace… (Gunners oo eegeysa inay gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah horyaalka Premier League) – Gool FM
(London) 14 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii October ee sanadkii 2018, marka ay garoonkeeda Emirates caawa ku soo dhoweynayso Crystal Palace.
Gunners ayaa ugu danbeyn heshay qaab ciyaareed wanaagsan, iyadoo xoogaa yar oo nafis ah uu helay tababarihii cadaadisku saarnaa ee Mikel Arteta, halka Palace ay ku dhibtoonaysay joogtayn la’aanta guulaha, isla markaana ay hal dhibic ka liidato kooxda ay ku xafiiltamaan London.
Garoonka: Emirtes Stadium
Laacibka khadka dhexe ee Arsenal, Thomas Partey ayaa qarka u saaran inuu markale diyaar u noqdo inuu ciyaaro kaddib muddo bil ah oo uu garoomada kaga maqnaa dhaawac bowdada ah.
Daafaca Gabriel ayaa sidoo kale ku lug lahaan kara kulankan kaddib markii uu muddo ku jiray karaantiil la xiriira Korona Fayras.
Gabriel Martinelli ayaa dhaawac canqowga ah ka soo gaaray iskululeyntii ka horeysay kulankii Sabtidii ee FA Cup-ka ay la ciyaarayaan Newcastle wuuna seegi doonaa kulanka caawa.
Daafaca Crystal Palace ee Mamadou Sakho ma ciyaari doono kulankaan sababo la xiriira dhaawac muruqa bowdada oo soo gaaray kulankii FA Cup ee Jimcihii ay la ciyaareen Wolves.
Laakiin daafaca kale ee Kooxda, Gary Cahill ayaa markale diyaar ah kaddib dhaawac muruqa ah oo uu la maqnaa.
>- Arsenal ayaa guul la’aan ah afartii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee ay la ciyaareen Palace, inkastoo saddex kulan ay barbaro galeen.
>- Palace ayaa guuleysatay kaliya shan kulan 47-dii kulan ee ay la ciyaareen Arsenal tartammada oo dhan, laakiin waa guuldarro la’aan (unbeaten) labadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqdeen garoonka Emirates, waxaana ay kala soo laabteen 1 Guul iyo 1 Barbaro.
>- The Gunners ayaa gool dhalinaysay dhammaan 20-kii kulan ee ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Palace kulammada horyaalka.
>- Arsenal ayaa guuleysatay afar kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan, waxaana ay dhaliyeen cel-celis ahaan 10-1.
>- Waxay gaari karaan afar guul oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii October ee sanadkii 2018.
>- The Gunners ayaa dhalisay siddeed gool saddexdeedii kulan ee la soo dhaafay horyaalka, waana in ka badan goolasha ay dhaliyeen 12-kii kulan ee markaas ka horreeyey.
>- Kooxda Mikel Arteta ayaa sameyn karta rikoor toos ah kooxda ee Premier League, kaasoo ah in 12 kulan oo isku xiga garoonkeeda ku ciyaareyso horyaalka aysan shabaqeeda nadiif ka dhigan ama gool ka ilaashan.
>- Bukayo Saka ayaa noqon kara da’yarkii ugu horreeyay ee gool dhaliya ama sameeya afar kulan oo isku xigta oo Premier League ah tan iyo Cesc Fabregas oo isagoo ka tirsan Arsenal sidaasi sameeyey bishii April ee sanadkii 2007.
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay saddex gool sidoo kalena casaan qaatay afartii kulan ee uu horyaalka kaga horyimid kooxda Palace.
>- Crystal Palace ayaa hal guul kaliya gaartay todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartammada oo dhan, waxaana laga dhaliyey 14 gool.
>- Markii ugu horreysay ayay shabaqooda gool ka ilaashadeen horyaalka Premier League tan iyo kulankii furitaanka ee xilli ciyaareedka ciyaartii ugu dambeysay ee ay wajaheen Sheffield United.
>- The Eagles ayaa kaliya shabaqeeda gool ka ilaashatay saddex jeer 26 kulan oo horyaalka Premier League tan iyo markii kubadda cagta dib loo bilaabay kaddib caabuqa Korona Fayras.
>- Wilfried Zaha ayaa gacan ka geystay 10 ka mid ah 22-kii gool ee Palace ay horyaalka ka dhalisay xilli ciyaareedkan, waxa uu dhaliyey siddeed gool isagoo caawiye ka ahaa labo kale.
>- Luka Milivojevic ayaa dhaliyey shan gool lix kulan oo uu horyaalka Premier League kaga hortagay Arsenal.
>- Roy Hodgson ayaa kaliya badiyay saddex ka mid ah 18 kulan oo Premier League ah oo uu ka horyimid Kooxda Gunners.